January 2022 – Alanzayar
ကြင်စိုးတို့အုပ်စုက အမှားတွေလုပ်ပီးရင်လုပ်လေ အမှုတွေက တစ်မှုပီးတမှု တိုးတိုးလာလေပဲ
ကြင်စိုးတို့အုပ်စုက အမှားတွေလုပ်ပီးရင်လုပ်လေ အမှုတွေက တစ်မှုပီးတမှု တိုးတိုးလာလေပဲ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ကြင်စိုးတို့အုပ်စုက အမှားတွေလုပ်ပီးရင်လုပ်လေ အမှုတွေက တစ်မှုပီးတမှု တိုးတိုးလာလေပဲ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ကြင်စိုးတို့အုပ်စုက အမှားတွေလုပ်ပီးရင်လုပ်လေ အမှုတွေက တစ်မှုပီးတမှု တိုးတိုးလာလေပဲ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို …
ဖေဖော်ဝါရီ(၁)ရက်နေ့အတွက်ဟောကိန်းထွက်ပြီသေချာနားထောင်ပါ see more…
ဖေဖော်ဝါရီ(၁)ရက်နေ့အတွက်ဟောကိန်းထွက်ပြီသေချာနားထောင်ပါ see more.. အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို ဖေဖော်ဝါရီ(၁)ရက်နေ့အတွက်ဟောကိန်းထွက်ပြီသေချာနားထောင်ပါ seemore.. အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို ဖေဖော်ဝါရီ(၁)ရက်နေ့အတွက်ဟောကိန်းထွက်ပြီသေချာနားထောင်ပါ seemore.. အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို ဖေဖော်ဝါရီ(၁)ရက်နေ့အတွက်ဟောကိန်းထွက်ပြီသေချာနားထောင်ပါ seemore.. အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို ဖေဖော်ဝါရီ(၁)ရက်နေ့အတွက်ဟောကိန်းထွက်ပြီသေချာနားထောင်ပါ seemore.. အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို ဖေဖော်ဝါရီ(၁)ရက်နေ့အတွက်ဟောကိန်းထွက်ပြီသေချာနားထောင်ပါ seemore.. အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် …
Mi ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ် miဖုန်းကိုကိုင်ထားရင်အရေးကြီးသိထားရမည့်အချက်များ သာကောတို့အကြံကမသေးတာအမှန်ပါ မြန်မာအများစုကတော့ နောက်ပေါ်ရင်ဝယ်မယ်ဆိုတာပဲသိတာပါ အခုဆို mi ဖုန်းကိုင်သူ မြန်မာနိုင်ငံ ငါးပုံတပုံနီးပါးရှိနေကြပါပြီ/ ကိုင်ကောင်းပြီးဈေးချိုရင်ပြီးယောသုံးနေတဲ့သူတွေသိကြဖို့ပါ အခုလို ဆင်ဆာတွေထည့်ထားတာဟာအသုံးပြုသူရဲ့လုံခြုံရေးကိုအရမ်းထိခိုက်စေပါတယ် အရေးမကြုံသေးလို့မသိပေမယ့် အကောင့်ဟက်ခံရတာမျိုးတို့ စက်မှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေပြောင်းလဲလာတာမျိုးတို့ဆိုသတိထားပါ အဲ့ဒါဆိုသင့်ဖုန်းကိုသူတို့ထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့်နေပါပြီ ဆင်းကဒ်တွေပေါလာသည်နှင့်အမျ လူတိုင်းဝယ်ကိုင်နေကြပြီး အင်တာနက်ဘေတွေအလိုလိုပျောက်တာ အပ်ဒိတ်တွေအလိုလိုတက်တာမျိုးတွေပါဖြစ်လာတတ်ပါတယ် အခုလိုအဖြစ်အပျက်တွေကို လစ်ယူယေးနီးယားနိုင်ငံမှာ စတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် people mediaမှာတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် မီဖုန်းများတွင် …
ပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါပန်းတွေ ကြာကြာခံနေစေမယ့်နည်းလမ်းများ ပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါပန်းတွေ ကြာကြာခံနေစေမယ့်နည်းလမ်းများ။ပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါပန်းတွေကိုကြာကြာခံနေစေမယ့် နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။အလုပ်စားပွဲမှာအလှပန်းအိုး ထိုးတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်အိမ်ဧည့်ခန်းမှာ အလှဆင်တာမျိုးနဲ့ ဘုရားမှာ ပန်းအိုးထိုးပြီး ပန်းကပ်ပူဇော်တဲ့အခါ ပန်းတွေခဏလေးနဲ့ ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့သွားတတ်လို့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့်နည်းလမ်းတွေကတော့ ပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါ ပန်းတွေကြာကြာခံနေစေမယ့် နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁)ပန်းတွေဝယ်လာတဲ့အခါ ရေဆေးပြီးပန်းအိုးထိုးတာမျိုးကို ချက်ချင်းမလုပ်ဘဲ ပန်းအရိုးရဲ့အောက်ခြေပင်စည်ကို နှစ်လက်မခန့် ခပ်စောင်းစောင်းလေးဖြတ်တောက်ပြီးမှ ထိုးပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ ပန်းတွေရေစုပ်အား ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ကြာကြာခံစေပါတယ်။ (၂)ပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါ …
လှချင်ရင် မပျင်းနဲ့ (မိန်းကလေးတိုင်း ဗဟုသုတအဖြစ် ဖတ်ထားသင့်ပါတယ်နော်)…a
လှချင်ရင် မပျင်းနဲ့ (မိန်းကလေးတိုင်း ဗဟုသုတအဖြစ် ဖတ်ထားသင့်ပါတယ်နော်) လှချင်ရင် မပျင်းနဲ့ခုခေတ် ကာလကြီးမှာက ကျား/မမရွေး လှပချင်ကြတာပါပဲ။မိန်းကလေးမှ လှလို့ရတာမဟုတ် ပါဘူးနော်။မိတ်ကပ် တစ်ပိဿာလောက်လိမ်းထားတဲ့ အထောက်အပံ့တွေပါတဲ့အလှကိုလည်း မဆိုလိုပါဘူး။ သဘာဝကျကျ ကြည်လင်ရှင်းသန့်နေ တဲ့မျက်နှာနဲ့ စိုပြည်ဝင်းပနေ တဲ့အသားအရေမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုယောင်္ကျား မိန်းမဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ကျက်သရေ ရှိစွာတင့်တယ်နေ မှာပဲနော် ။လက်ဘက်ကောင်းစားချင်ရင် ပလောင်တောင် တက်နှေးရတယ် ဆိုတဲ့စကားပုံ လိုပဲလေ။ …
ဆွမ်းတော်စွန့်ပြီး စားမိလျှင် အပြစ်ရှိပါသလား? (ကျော်မသွားဘဲဖတ်ကြည့်)..0
ဆွမ်းတော်စွန့်ပြီး စားမိလျှင် အပြစ်ရှိပါသလား? (ကျော်မသွားဘဲဖတ်ကြည့်) (မေး)အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်တိုိ့ မိသားစု သည် နေ့စဉ် ထမင်းဟင်းနှင့် ရလာသမျှသော ခဲဘွယ်ဘောဇဉ်တို့ကို ဦးဦးဖျားဖျား ဆွမ်းတော် တင်ပြီးမှ စွန့်သည့်အခါ စားသောက်ခဲ့ ကြသည်မှာ နှစ်များစွာပင်ရှိပါပြီ။ ဗုဒ္ဓဝေယျာဝစ္စ ပြုကြသူများမှာ ဇနီးနှင့်သမီးများသာ ဖြစ်ကြ၍ ကျန်လူများ အပြစ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရသဖြင့် များစွာ တုန်လှုပ် မိပါ သည်။ …
မိန်းကလေးအလှ အိပ်ယာထ၏ အဓိပ္ပါယ် (မသိသေးသူများရှယ်ထား)
မိန်းကလေးအလှ အိပ်ယာထ၏ အဓိပ္ပါယ် (မသိသေးသူများရှယ်ထား) မိန်းကလေး အလှ အိပ်ယာ ထ တဲ့။ ဒီ ဆိုရိုးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို မသိတဲ့သူတွေ ရှိနေကြ ပါလိမ့် မယ် ။ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ အဆိုအရ မိန်းကလေး ရယ်လို့ ဖြစ်လာ ခဲ့ပြီ ဆိုရင်အရွယ်ရောက် လာလို့ အိပ်ယာနိုးတဲ့ အခါမှာ ကိုယ် လက် သန့်စင်မှုနဲ့ အစပြု …
မိမိ အိမ်သာအား ဆေးကြော သန့်စင်ခြင်း အကျိုး( ၁၁ )ပါး
မိမိ အိမ်သာအား ဆေးကြော သန့်စင်ခြင်း အကျိုး( ၁၁ )ပါး ၁။ မိမိစိတ်လည်းကြည်လင်စေ၍ သူတစ်ပါးစိတ်ကိုလည်းကြည်လင်စေခြင်း။ ၂။ ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့၏ ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရခြင်း။ ၃။ ဖြစ်ရာဘဝတွင် ချော့မွတ်နုညံ့သောအသားရေနှင့်ပြည့်စုံခြင်း။ ၄။ ခန္ဓာကိုယ်သည် ပန်းရနံ့ကဲ့သို့မွှေးပျံ့သောအနံ့ရှိခြင်း။ ၅။ မျက်နှာအဆင်းကြည်လင်ခြင်း။ ၆။ စိတ်ညစ်ညူးဖွယ်ရာများနှင့်မကြုံရခြင်း။ ၇။ စိတ်ချမ်းသာသဖြင့် ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းခြင်း။ ၈။ ပညာဉာဏ်ကြီးခြင်း။ ၉။အသက်ရှည်ခြင်း။ ၁၀။ …
ဒရုန်းနဲ့ဗုံးကြဲခံရ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ဒရုန်းနဲ့ဗုံးကြဲခံရ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ဒရုန်းနဲ့ဗုံးကြဲခံရ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ဒရုန်းနဲ့ဗုံးကြဲခံရ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ဒရုန်းနဲ့ဗုံးကြဲခံရ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို …